အခမဲ့ BUDDHA.DLL DOWNLOAD - DLL - 2019
အဆိုပါ buddha.dll စာကြည့်တိုက်ကိုပြုပြင်တာတွေ
Google Chrome က - တစ်ရေပန်းစားသော web browser ကို, နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအစွမ်းထက်နှင့် functional web browser ကို, ကိုယ်ဖြစ်၏။ အဆိုပါ browser ကိုသီးခြား tabs များဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့်အတူမျိုးစုံ web စာမျက်နှာများတွင်သွားရောက်လွယ်ကူစေသည်။
အဆိုပါ browser မှာတစ်ချိန်တည်းမှာ, သင်သည်ထိုသူတို့အကြားအကူးအပြောင်းတစ်ခုအဆင်ပြေလမ်းအတွက်ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုအလိုရှိသောအရေအတွက်ကဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုအထူး bookmark - Google Chrome ကိုအတွက် tabs ။
Google Chrome ကိုတစ်ဦး tab ကိုဖနျတီးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
browser ကိုသုံးစွဲသူများ၏အဆင်ပြေဘို့သင့်ကိုတူညီတဲ့ရလဒ်အောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြု tabs များကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများစွာပေးပါသည်။
Method ကို 1: keyboard shortcuts တွေကိုသုံးပြီး
သူတို့ရဲ့ browser မှာအားလုံးအခြေခံစစ်ဆင်ရေးများအတွက် Google Chrome အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းတခြား web browser များအဘို့မသာများသောအားဖြင့်အညီအမျှတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း keyboard shortcuts တွေကိုပေးပါသည်။
Google Chrome က tabs များစေနိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်သင်၏ browser ကိုဖွင့်လှစ်ရန်သာလိုအပ်ရိုးရှင်းတဲ့ key combination ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပြီးရင် Ctrl + T ကိုထိုအခါဘရောက်ဇာအသစ်တစ်ခု tab ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်။
Method ကို 2: tab ကိုဘားအသုံးပြုခြင်း
အထူး browser ကိုအလျားလိုက်လိုင်းကျော်အထက်ပိုင်းဒေသများတွင်ပြသ Google Chrome ကိုအားလုံး tabs များ။
ယင်းလိုင်းပေါ် tabs များမဆိုအခမဲ့ဧရိယာပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ right-click လုပ်ပြီးနှင့်ဖြတ်လမ်း menu ကနေမှ scroll "ဟု New Tab ကို".
Method ကို 3: browser ကို menu ကိုအသုံးပြုခြင်း
မီနူးခလုတ်ပေါ်တွင် browser ၏အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ မျက်နှာပြင်သင်သာရှေးခယျြနိုငျသောစာရင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် "ဟု New Tab ကို".
ဤရွေ့ကားသစ်တစ်ခု tab ကိုဖန်တီးဖို့အားလုံးကိုနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Myanmar: The Hidden Genocide. Al Jazeera Investigations (နိုဝင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © DLL 2019